Usinde kukubi owayengumdlali weChiefs | News24
Usinde kukubi owayengumdlali weChiefs
Johannesburg - Lowo owayengumdlali weKaizer Chiefs, uDavid Obua, ulimale kanzima kanti kuthiwa usinde ngenhlanhla ngemuva kokubandakanyeka engozini yemoto ngoLwesibili ebusuku.
Lo mdlali wase-Uganda ubehamba nabanye abadlali besuka enhlokodolobha yezwe eKampala, belibhekise eNtungamo ngesikhathi imoto yabo ishayisan neloli.
“Nginenhlanhla ukuthi ngisinde engozini ngoba imoto ilimale kakhulu,” kusho u-Obua kwi-AfricanFootball.com.
Funda nalolu daba: UKhuzwayo noMoleko bazovala ezabashiuyile
Umdlali wase-Uganda nophinde adlalele iKCCA,uSavio Kabugo, kanye nomshayeli, uFriday Kajoko, bathole ukulimala, kwathi u-Obua kanye nowayengumdlali we-Asante Kotoko, uJoseph Ochaya, bona bangalimala.
“Ababili abalimele abasekho esimeni esibucayi kodwa sibafisela ukululama okusheshayo,” kusho unobhala weqembu uDavid Tamale.